Cabsi soo food-saartay Gabdhaha Soomaalida ee ku nool Nairobi | KEYDMEDIA ONLINE
Cabsi soo food-saartay Gabdhaha Soomaalida ee ku nool Nairobi
Waxaa baraha bulshada lagu faafiyay muuqaallo walaac leh, oo laga soo duubay mid ka mid ah labo gabdood oo Soomaali ah, kuwaas oo talaadadii la soo dhaafay koox burcad ku af-duubteen magaalada Nayroobi.
NAIROBI, Kenya - Cabsi xoog leh ayaa soo food saartay haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Magaalada Nayroobi ee dalka Kenya kadib markii dawaan kooxo aan heebtooda la garan ay af-duubteen Xafsa Maxamed Luqmaan iyo Xafsa Cabdiwahaab, kuwaas oo la baadi goobayo tan iyo 15-kii bishaan.
Kooxo kala duwan ayaa loo abaabulay Arbacadii inay baadi goobaan haweenkaan oo laga afduubtay deegaanka Kamukunji, ee magaalada Nairobi, waxaana baraha bulshada si weyn u qabsaday muuqal iyo sawirro argagax leh oo la rumeysan yahay inay tahay Xafsa Maxamed Luqmaan, waxaana ka muuqda jirdil xooggan oo ay u geysteen kooxda af-duubka ku heysata.
Ehelka ayaa sheegay in dadka haysta Xafsa aay dalbadeen lacag madax furasho ah oo dhan 5 milyan oo lacagta Kenya ah, isla markaana haddii ay waayaan ay duli doonaan.
Qoysaska ayaa ku wargaliyay maqnaanshaha hablaha saldhigga booliiska California ee xaafadda Islii, 15-kii bishaan Juun, Booliska ayaa sheegay in kooxda burcadda ahi ay dhuumaaleysi ku jiraan, si joogta ahna ay u badalayaan goobaha ay ku sugan yihiin.
Kenya ayaa ka mid ah dalalka ay ku noolyihiin Soomaaliya ugu badan, kuwo ku dhashay iyo kuwo tagayba, waxayna arrintaa caqabad hor leh ku noqoneysaa nabad ku wada noolaashiyaha.
Xiriirka Diblumaasiyadeed ee labada dal ayaa maalmihii la soo dhaafay u muuqday inuu dib u so hagaagayay, kadib markii is-fahan la’aan baahsan ay jirtay ku dhawaad Sideeddii bilood ee la soo dhaafay.